Mateo Asɛmpa No 27:1-66
Wɔde Yesu kɔmaa Pilato (1, 2)
Yuda hyɛɛ ne ho akɔmfo (3-10)
Wɔde Yesu kogyinaa Pilato anim (11-26)
Wodii Yesu ho agoru wɔ baguam (27-31)
Wɔbɔɔ no asɛndua mu wɔ Golgota (32-44)
Yesu wui (45-56)
Wosiee Yesu (57-61)
Wɔwɛn ɔda no denneennen (62-66)
27 Na ade kyee no, asɔfo mpanyin ne ɔman no mpanyimfo nyinaa hyiaam, na wɔhwɛɛ ɔkwan a wɔbɛfa so akum Yesu.+ 2 Wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn guu no de no kɔe, na wɔde no kɔmaa amrado Pilato.+ 3 Bere a Yuda a oyii Yesu mae no hui sɛ wɔabu Yesu kumfɔ no, onuu ne ho, na ɔsan de nnwetɛbona 30 no kɔmaa asɔfo mpanyin ne mpanyimfo no.+ 4 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mayɛ bɔne sɛ mayi onipa a ne ho nni asɛm ama.”* Wɔkae sɛ: “Ɛfa yɛn ho bɛn? Ɛyɛ wo ara w’asɛm!” 5 Enti ɔtow nnwetɛbona no guu asɔrefi hɔ, na ofii hɔ kɔe. Na ɔkɔhyɛɛ ne ho akɔmfo.*+ 6 Na asɔfo mpanyin no sesaw nnwetɛbona no, na wɔkae sɛ: “Mmara mma kwan sɛ yɛde begu sika akorae kronkron hɔ, efisɛ ɛyɛ mogya sika.” 7 Bere a wohyia dwinnwen ho no, wɔde sika no tɔɔ asaase,* na wɔde yɛɛ baabi a wobesie ahɔho. 8 Enti ɛde besi nnɛ, wɔfrɛ saa asaase no, Mogya Asaase.+ 9 Na nea wɔnam odiyifo Yeremia so kae no baa mu sɛ: “Na wogyee nnwetɛbona 30 no, ɛbo a wotwa too onipa no so no, onipa a Israel mma binom twaa bo too no so no, 10 na wɔde gyee asaase* sɛnea na Yehowa* ahyɛ me no.”+ 11 Afei Yesu begyinaa amrado no anim, na amrado no bisaa no sɛ: “Wone Yudafo Hene no anaa?” Yesu buae sɛ: “Wo ara na woreka.”+ 12 Na bere a asɔfo mpanyin ne mpanyimfo no rekeka nsɛm gu no so no,* wanyi ano.+ 13 Ɛnna Pilato bisaa no sɛ: “Enti nsɛm bebrebe a wɔreka gu wo so yi, wonte?” 14 Nanso wammua no; wanka asɛm baako mpo. Enti ɛyɛɛ amrado no nwonwa paa. 15 Sɛ edu afahyɛ biara a, nea na amrado no yɛ ne sɛ, ogyaa nnipa a wogu afiase no baako ma nnipadɔm no; nea nkurɔfo no bɛka sɛ onnyaa no no, na wagyaa no.+ 16 Bere no ara mu no, na obi da afiase a wɔfrɛ no Baraba. Ná wagye dimmɔne. 17 Enti bere a wohyiaam no, Pilato bisaa wɔn sɛ: “Hena na mopɛ sɛ migyaa no ma mo, Baraba anaa Yesu a muse wɔfrɛ no Kristo no?” 18 Ná Pilato nim sɛ ahoɔyaw nti na wɔde Yesu abrɛ no. 19 Afei nso, bere a ɔte atemmu agua so no, ne yere soma baa ne nkyɛn sɛ: “Mfa wo ho nnye onipa trenee yi asɛm mu koraa, na ne nti, mahu amane pii wɔ dae mu nnɛ.” 20 Nanso asɔfo mpanyin ne mpanyimfo no tutu guu nnipadɔm no asom sɛ, wɔnka sɛ wɔpɛ Baraba,+ na wɔmma wonkum Yesu.+ 21 Ɛnna amrado no bisaa wɔn sɛ: “Nnipa baanu no mu hena na mopɛ sɛ miyi no ma mo?” Wɔkae sɛ: “Baraba.” 22 Pilato bisaa wɔn sɛ: “Ɛnde dɛn na menyɛ Yesu a muse wɔfrɛ no Kristo no?” Wɔn nyinaa kae sɛ: “Bɔ no asɛndua mu!”*+ 23 Obisaa wɔn sɛ: “Adɛn? Bɔne bɛn na wayɛ?” Nanso wɔkɔɔ so teɛteɛɛm denneennen sɛ: “Bɔ no asɛndua mu!”+ 24 Pilato hui sɛ ɛrenkosi hwee, na mmom basabasa na ɛde reba. Enti ɔfaa nsu de hohoroo ne nsa wɔ nnipadɔm no anim, na ɔkae sɛ: “Minni ɔbarima yi mogya ho fɔ. Mo ara monyɛ nea mobɛyɛ.” 25 Ɛnna ɔmanfo no nyinaa kae sɛ: “Ne mogya mmra yɛne yɛn mma so.”+ 26 Ɛnna ogyaa Baraba maa wɔn. Afei ɔma wɔhwee Yesu,+ na ɔde no maa wɔn sɛ wɔnkɔbɔ no asɛndua mu.+ 27 Afei amrado no asraafo de Yesu kɔɔ amrado no fi hɔ, na wɔboaboaa asraafodɔm no nyinaa ano betwaa ne ho hyiae.+ 28 Na wɔworɔw n’ataade, na wɔde ntama kɔkɔɔ bi furaa no.*+ 29 Afei wɔde nsɔe nwenee ahenkyɛw de hyɛɛ ne ti, na wɔde demmire* hyɛɛ ne nsa nifa mu. Na wɔkotow n’anim dii ne ho agoru sɛ: “Asomdwoe nka wo, Yudafo Hene!”* 30 Na wɔtetew ntasu guu no so.+ Afei wogyee demmire* no, na wofii ase de hwehwee ne tirim. 31 Bere a wodii ne ho agoru wiei no, woyii ataade tenten no fii ne ho de n’ataade nguguso hyɛɛ no, na wɔde no kɔe sɛ wɔnkɔbɔ no asɛndua mu.+ 32 Bere a wɔrepue akɔ no, wohuu Kireneni bi a wɔfrɛ no Simon. Saa ɔbarima yi na wɔhyɛɛ no sɛ ɔnsoa Yesu asɛndua* no.+ 33 Na bere a woduu baabi a wɔfrɛ hɔ Golgota a ɛkyerɛ Tikora+ no, 34 wɔde ade nwenweenwene bi fraa nsã* sɛ ɔnnom;+ nanso bere a ɔde kaa n’ano no, wannom. 35 Bere a wɔbɔɔ no asɛndua mu no, wɔbɔɔ ntonto kyɛɛ n’ataade nguguso mu,+ 36 na wɔtenatenaa ase wɔ hɔ hwɛɛ no so. 37 Bio nso, wɔkyerɛw nea enti a wɔretwe n’aso no bɔɔ n’atifi sɛ: “Oyi ne Yesu, Yudafo Hene No.”+ 38 Na wɔbɔɔ akorɔmfo werɛmfo baanu bi asɛndua mu kaa ne ho, ɔbaako wɔ ne nifa, ɛnna ɔbaako wɔ ne benkum.+ 39 Na wɔn a wɔretwam no kasa tiaa no.+ Wɔwosow wɔn ti,+ 40 na wɔkae sɛ: “Ɛnyɛ wo na wokae sɛ wubedwiriw asɔrefi no agu na wode nnansa asi no?+ Gye wo ho ɛ! Sɛ woyɛ Onyankopɔn ba a, si fi asɛndua* no so!”+ 41 Asɔfo mpanyin ne akyerɛwfo ne mpanyimfo no nso fii ase dii ne ho agoru saa ara. Wɔkae sɛ:+ 42 “Ogyee nkurɔfo, nanso ontumi nnye ne ho! Ɔyɛ Israel Hene;+ ma onsi mfi asɛndua* no so, na yebegye no adi. 43 Ɔde ne ho ato Onyankopɔn so; sɛ Ɔpɛ n’asɛm a, ma Onnye no,+ efisɛ ɔkae sɛ, ‘Meyɛ Onyankopɔn Ba.’”+ 44 Saa ara na akorɔmfo werɛmfo a wɔbɔɔ wɔn asɛndua mu kaa ne ho no mpo yeyaw no.+ 45 Efi dɔn a ɛto so asia* rekɔ no, esum baa asaase no nyinaa so kosii dɔn a ɛto so akron.*+ 46 Bɛyɛ dɔn a ɛto so akron* no, Yesu de nne kɛse teɛɛm sɛ: “Eli, Eli, lama sabaktani?” Ɛkyerɛ, “Me Nyankopɔn, me Nyankopɔn, adɛn nti na woagyaw me?”+ 47 Bere a wɔn a wogyinagyina hɔ no tee eyi no, ebinom fii ase kae sɛ: “Ɔbarima yi refrɛ Elia.”+ 48 Ɛhɔ ara na wɔn mu baako tuu mmirika kɔfaa sapɔw,* na ɔde bɔɔ nsã* a emu kaw mu de tuaa demmire* ano, na ɔde kɔmaa no sɛ ɔnnom.+ 49 Na wɔn a aka no kae sɛ: “Munnyaa no! Momma yɛnhwɛ sɛ Elia bɛba abegye no anaa.” 50 Yesu san de nne kɛse teɛɛm, na ogyaa ne honhom mu.*+ 51 Na hwɛ! ntwamutam a ɛwɔ kronkronbea hɔ+ no mu tew abien+ fi soro besii fam,+ asaase wosowee, na abotan mu paapaee. 52 Na adamoa* so buebuei, na akronkronfo a wɔadeda no afunu* bebree puepuei, 53 na nnipa bebree huu afunu no. (Ne wusɔre akyi no, nnipa bi a wɔkɔɔ amusiei hɔ no bi kɔɔ kurow kronkron no mu.) 54 Bere a ɔsraani panyin no ne wɔn a ɔne wɔn rehwɛ Yesu so no huu asaasewosow no ne nea ɛrekɔ so no, wɔbɔɔ hu kɛse, na ɔkae sɛ: “Ampa ara, Onyankopɔn Ba ni.”+ 55 Ná mmea bebree wɔ hɔ a wogyinagyina akyiri rehwɛ; wɔn na na wodi Yesu akyi fi Galilea resom no.+ 56 Wɔn mu bi ne Maria Magdalene ne Yakobo ne Yose maame Maria, ne Sebedeo mma+ no maame. 57 Esiane sɛ na adu anwummere nti, osikani bi a ofi Arimatea a wɔfrɛ no Yosef baa hɔ. Ná ɔno nso abɛyɛ Yesu suani.+ 58 Saa ɔbarima yi kɔɔ Pilato nkyɛn kɔsrɛe sɛ ɔmfa Yesu amu+ no mma no. Na Pilato kae sɛ wɔmfa mma no.+ 59 Yosef faa amu no, na ɔde nwera pa a ani tew kyekyeree no.+ 60 Ná watwa ɔda foforo+ ato abotan mu a ɛyɛ ne dea. Enti ɔde amu no kɔtoo mu. Afei opiaa ɔbo kɛse bi twerii ɔda no ano, na ogyaw hɔ kɔe. 61 Na Maria Magdalene ne Maria baako no de, wɔkaa hɔ, na wɔtenaa ɔda no anim.+ 62 Da a edi hɔ a ɛyɛ Ahoboaboa Da+ no akyi no, asɔfo mpanyin ne Farisifo no behyiae wɔ Pilato anim, 63 na wɔkae sɛ: “Owura, yɛakae sɛ bere a okontomponi no te ase no, ɔkae sɛ, ‘Nnansa akyi no, mɛsɔre.’+ 64 Enti ka ma wɔnkɔbɔ ɔda no ho ban nkosi ne nnansa so, na n’asuafo no ammewia no+ anka ankyerɛ nkurɔfo sɛ, ‘Wasɔre afi awufo mu!’ Anka nkontomposɛm a edi akyiri yi bɛsen nea edi kan no.” 65 Pilato ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momfa asraafo nkɔ, na monkɔwɛn ɔda no sɛnea mubetumi.” 66 Enti wɔkɔe, na wɔde ɔbo kataa ɔda no ano denneennen, na wɔmaa asraafo wɛn hɔ.
^ Nt., “Mayɛ bɔne sɛ mayi mogya a asɛm nni ho ama.”
^ Anaa “ɔkɔsɛn ne ho.”
^ Nt., “ɔnwemfo asaase.”
^ Anaa “rebɔ no sobo no.”
^ Anaa “ataade afasebiri bi hyɛɛ no.”
^ Anaa “owui.”
^ Anaa “nkae ada.”
^ Anaa “amu.”